Baahida Golaha Guurtida Soomaliya ! ( AQALKA ODAYAASHA )
Baahida Golaha Guurtida Soomaliya !
( AQALKA ODAYAASHA )
Hadii taarikhdii hore ee dalka somaliya dib loo raaco, xiriirkii somalida iyo carabtu waxaa uu biloowday 7 A.D , Kadib markii a somaliya soo degeen carab qoreeysh ah oo ka timid yemen. Sidoo kale Ganacasatiid portuquese (Christopher) da Gama was the son of Vasco da Gama and younger brother of Estevão da Gama. He first came to Somalia and India in 1532 ) waxaa ay soo dageen dhulka somalida oo ay xukayeen dhowr magaalo oo xeebta ku taala sida Merka iyo braawe. Dhulkaas oo markii danbe ay la wareegeen boqortooyadii Zinzibar . taarikhda cusub ee soomaliya inta la ogyhay waxaa ay bilaabatay qarnigii 19aad. Markii reer yurub bilaabeen ganacsigii ay ka hirgaliyeed arliga somalida. Kambanigii la oran jiray british East india Company ayaa ku hamiyey in uu helo dekado waxaana uu heshiis la galay boqortooyadii Tajura ( Mordern day Eretaria ) 1840. waxaa ku soo xigay kii ingirisku somalida waqooyi ugu balan qaaday inuu ku difaacayo danahooda kasoo uu heshiisaasu kulagalay dhowr caaqil oo ka soo jeeday gobolada waqooyi ee soomalida 1886. ujeedada ingirsku waxaa ay ahayd inuu ilaashado danihiisa isku xirka ganacsi ee Asia . waxaa tass ku soo xigay heshiiskii ingirisku uu la galay boqor mililiq ee xusuudkii itobiya iyo Somaliland lagu calaamadeeyey 1897.
Labaatankii sano ee u horeeysay qarnigii labatanaad waxaa awoodii ingiirska ka hortimid hogaamihihii islaamiyiinta somalida ee Sayid maxmed Cabdulle xasan. Kasoo dagaalo lagu hoobtay la galay gumeeysiga kasoo kadib dhamaaday 1920 kadib markii ciidamada ingiriisku ay kula dagaalmaeen diyaaaradaha wax bam gareeye ciidankii ingiriiska wadaadkaas somaliyeed ee degamada Taleex ee Gobolka Nugaal. Somaliya waxaa ay noqotay dalkii labaad ee muslin ah ee Ciidanka reer galbeedku kula dagaalmaan diyaarado. Kuna xasuuqaan maati , caruur iyo haween u badan oo ku noolaa dhulkaas somalida, waxaa ay ku tureen bambooyin sida suntan ay ka dhashaan cuduraa oo hadii aanay ku dilin uu cudurka suntaas ka dhashay laayey dad badan oo Somali ah.
Talyaanigu sidoo kale waxaa 1885 la galay heshiis Sultan of Zinzibar . waxaa uu uga sii gudbay hashiiskii ugu horeeyey ee uu la galay saldanadii Hobyo iyo caluula 1889. tasoo ay odoyaashii degaankaas markii ugu horeeysay ogolaaden in ay ku hoos hiraan daldii talyaaniga oo danahooda iyo kan talyaanigaba ilaalinayey. Inii u dhaxeeysay 1897 ilaa 1908 talyaanigu waxaa uu xiriir ito heshiisba kula sameeyey ingiriska iyo xabashida xuduudka dhulkii koofurta oo markaas loo yiiqiin ( Italian Somaliland) . dhulkaas waxaa loo aqoonsaday dhul hoos taga talyaaniga kaasoo loo sameeyey sharciga dhulka gumeeysiga talyaanigu maamulo. Talyaanigu waxaa u sii gudbay gudaha koofurta somaliya 1924. halkaas uu la wareegay kismayo. Waxa kale oo meesha ka saaray kuna qasbay in ay isaga hoos tageen saldanadii yaryaraa ee hobyo iyo tii majeerinia (independent sultanates of Obbia and Mijertein ) , isagoo ka eryaey, ceelbuur iyo Budbud 1925.
Heshiiskii talyaniga Caaqilada Somalida
Talyaanigi markii uu yimid dhulka somalida waxaa markiiba heshiis la galay saldanadihii ka jiray magaalooyinka qaarkod sida sultan of obbia kenadiid dec 1888 isagoo u cusbooneeysiiyey 1895 tii caluula 1889 oo sidoo kale uu u cusnbooneeysiiyey 1895 . caaqiladii qabilooyinka somaliyeed ee gudaha somaliya waxaa uu u aqoonsaday in yihiin hogaamiyeyaasha beelaha waxaana u qaray mushaar joogta ah ( baga di notabile ) . Waxaa ay noqdeen guurti an meel ku urursaneeyd ee uu kala tashado arimaha somaliya iyo degaanda ay ka soo jeedaan, taasi waxaa ay keentay in ay si toos ah ula shaqeeyaan dowladii gumeeysiga talyaaniga dhulal kaas ka hirgashay , waxaa uu gumeeysigu ogolaaday in wixii ay tabtaan isla markiiba wax laga qabto oo xitaa laga bedelo shaqsiyaadka cadaanka ah ee ay fahmi waayaan , iyo hadii uu dhaqankooda iyo diintooda si toos ah u fara geliyo inaanu dhulkaas sii maamuli doonin il commisario , tusaale hadii aan u soo qaadano sida maamulka magaaladooda hadii aanay la dhacsanayn horjoogayaasha ama salaadiinta gobollka iyo degmooyinku waxaa looga yeeri jiray muqdisho lagana badeli jiray hadii uu xaalku gaaro meel xun.
Dhibatooyinkii dalka somaliya ka dhacay gaar ahaan koofurta waxaa muuqatay in lixdii gobal ee kuufurta ay meesha ka maqnaayeen awooda dhaqan ee hagaamiyayaasha beelaha guud ahaan gaar ahaan degaanada gobolad dhexe iyo banaadir , alto guiba iyo basa guiba, kadib markii uu burburay maamulkii gumeeysiga , hogaankii ay qabsadeen raga laga soo doorto degmooyinka ha yeeshee aan wax ka qaban dhulkii laga soo doortay. Oo iyagu iskaga cayila wixii ay helaan. Ttaas waxaa xigtay 21 sano , oo oday dhaqameed , guurti ay noqotay wax lagu qoslo oo aan la tixgelin , marka laga reebo Gobolada waqooyi , bari iyo nugaal oo iyagu xoooga dhaamay kuwa aan kor ku soo sheegnay maadaama jiiraanka qabiilku uu ku xoog badnaa marka loo barbar dhigo gobolada kale ee koofurta . Waxaa ay Oday dhaqameedyada koofurtu shaqadoodii ku soo kooban tay marka ay dagaalo dhacaaan oo ay yimaadaan ama loo yeero si ay heshiiska and dagaalka beelaha dhexdooda ah wax uga abaabulaan oo ka qayb qaatan. Waxaa amaan mudan in guurtida beelaha waqooyi galbeed 15 sano ka hor ku guuleeystay in ay u dhexeeyaan dowlada iyo shacabka kana mid noqdaan system dowladnimo inkasta oo ay jiraan golehoose oo sharci dejin .
Dhismaha Goleha odayaasha soomalia .
Waqtigaan Hada la joogo koofurta waa markii u horeeysay ay timid in la dhegeysto oday dhaqameed reer koofurred ah , aqoonyahano reer koofurred ah, iyo wadaad reer Kooreed ama Somali ah oo ay shicibka tixgaliyaan kuna xirmaan dowlada ku meel gaarka ah ee uu hogaamiyo wadaadkan sh. Shariif. Sh axmed Kadib markii sh shariif sh axmed la doortay, ee uu qoor dhiibtay horjoogayaasha beelaha waxaa soo baxday in shacabku ay bislaadeen oo dagaal meel iska dhigeen , waxaa soo baxday in odayashii dagaalka ku baaqi jiray ay maanta nabad ku baaqaan. Tasoo ah markii ugu horeeysay oo ay isku raacaan beeluhu inaan dagaal xal ku iman karin, waxaa la kumiyey culumadii ugu aqoonta badneeyd somaliya oo ku tilmaamay ninkii dagaal danbe iclaamiya inuu aduun iyo aqira ku seegayo, qof ku raaci doonaana aysan jirin wadaadada maadaama shicibkiu ku diideen dagaal. Waxaa soo baxay in beelihii dagaal u jooga ahaa ay nabad u joog noqdaan oo dadaal ugu jiraan inaan nabadan laga kala daadin, oo ay ku fara adeegaan sidii kuwii waqooyiga. Inkasta oo ay wali jiraan rag wali tumaya durbaanka dagaalka hadan waxaa la joogaa waqti hal meel loo wada jeestay. Hadaba si arintaa loo joogteeyo maxaa loo baahan yahay. Dhinaca dowlada
In dowladu ay sameeyso gole guurto somaliyeed oo ka kooban 100 Rag/dumar si toos ama aan toos ahayn ugu xiran beelaha somaliyyed oo dhan.
in baarlaamnku ansixiyo dhismaha golaha guurtida somaliyeed , aqalka sare ee odayasha iyo yareenta golaha shacabka ku meel gaarka ah 275 labo sano kadib.
in ay noqdaan aqal sare oo sharci dajeneed oo leh sharci u gaar ah iyo mushaar joogto loo qoro . meel ay ku kulmaan .
hadii aan la joogteen golaha odyaasha ee nabada ka keenay shacabka muqdisho Iyo isku duubnaantaa ka muuqata culumada diinta, shacabka iyo dowalda waxaa iman doonta in mustaqbalka fog ay kala jiitaan qabaailadu oo odayaashu, kadib marka qabaailadu danahooda ka arki waayaan dowlada islamarkaana uu yaaraado taageeradooda ay u hayaan dowada, sidaas darteed ayey muhiim tahay in laga faaiideeysto maanta inta ay cusub tahay oo loo qoro mushaar joogto ah oo ay kaga maarmaan fagelin siyasadeed ee dibada ah ama gudaha ah dhinaca qabaailada , isaalimiyiinta madaxa adag, iyo hogaamiyekooxeedyada laga yaabo in ay dib u soo noolaadaan , golhana guurtida waa in ay taldooda dowladu la tixgeliso maadaama ay yihiin qayb dowlada ka mid ah . waxaa kale oo loo isticmaali karaa wacyi galinta shacabka loo diro gobolada iyo dagmooyinka iyo meel kasta oo shaqaaqo siyaasaded ka jirto . Dhamaad
Hussein Abdikarim ahmed- Gendisch